ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်မှပျက်ဆီးပုံနှင့်သရဏ by Aung Naing - Issuu
ဗုဒဘ္ဓာသာအဖြစ်မပျှက်ဆီး ပုနံငှသ့် ရဏဂုအံကြောင်း
ဗုဒဘ္ဓာသာအဖြစ်မှ ပျက်စီး ပုံ (က)သရဏဂုပျံက်စီး ခြင်း၊(ခ) အယူဝါဒပျက်စီး ခြင်းဆြုိ ပီး ၂ မျိုးရှပိါတယ်။
(က) သရဏဂုံပျက်စီး ခြင်း သရဏဂုံ ပျက်စီး ခြင်းဆုတိာက ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသုံးပါးသည် ကုိး ကွယအ်ားထားရာ
ဖြစ်သောကြောင့် သရဏ မည်ပါတယ်။ ထုသိရဏပေါ်တွင် တွေဝေ ယုမှာံးမှု မရှပိဲ ကြည်ညို လေးမြတ် ဆည်းကပ် ကုိး ကွယ်ေသာ သဒ္ဓါ ပညာ စသည့် ကုသလို စ်တိမ်ျားသည် သရဏဂုမံည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သရဏဂုဆံတိုာဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသုးံ ပါးအပေါ် တွေဝေ ယုံမှားမှု မရှပိဲ သဒ္ဓါ ပညာ ဦးစီးပြီး ဆည်းကပ် ကုိး ကွယြ် ခင်းကို ခေါ်တာပါ။ (တနည်း) သရဏ ဆုသိည်မှာ ဘေးအန္တရာယ်ကို တားဆီး ကာကွယ် ပေးတတ်သော၊ ပယ်ဖျောက်ပေးတတ်သော အရာ/ပုဂ္ဂုိ လ် ဟု အဓိပ္ပါ ယ်ရပေသည်။ ဘေးအန္တရာယ်ဆသို ည်မှာ
1. ၀ဋ်ဘေး (ကိလေသာဝဋ်၊ ကမ္မ၀ဋ်၊ ၀ိပါက၀ဋ်) 2. စိတပ်ေူလာင်မှု 3. ကုယိဆ်င်းရဲမှု
4. ဒုဂတ္ဂဘိဆုံ င်းရဲမှု တုကို့ ဆုလိသို ည်။
ထု(ိ ၄)မျိုးသော ပင်ပန်းဆင်းရဲမတှုို့ကို ပယ်ဖျောက်ပေးတတ်သော၊ တားဆီးကာကွယ် ပေးတတ်သော အရာ/ပုဂ္ဂုိ လ် သည် သရဏ ဖြစ်ပေ၏။
တနည်းအားဖြင့် ကိလေသာ စိတအ်ပူတကိုို့ သက်သာ လျော့ပါးသွားစေမှသာလျင် သရဏ ဖြစ်ပေသည်။ ထုေိ့ ကြာင့် သရဏ ဆုသိည်မှာ ကိုးကွယရ်ာပင်ဖြစ်၏။
ထုသို့ (၄)မျိုးသော ပင်ပန်းဆင်းရဲမှု စိတပ်ေူလာင်မှု တုကို့ မသက်သာစေနိုင်ေသာ၊ ကာကွယ်
တားဆီးခြင်းငှာ မစွမ်း နုင်ိသော အရာတုသိ့ ည် သရဏ မမည်ပေ။ သရဏ မဖြစ်လျင် ကိုးကွယရ်န်မထုကိ၊် ကြည်ညိုရန် မထုကိေ်ပ။ ကုိး ကွယရ်ာ မဖြစ်ပေ။ ထုသိရဏဂုသံည် လောကီ သရဏဂုနံငှ့် လောကုတရ္တာ
သရဏဂုံ ဆြုိ ပီးတော့ နှစမ်ျိုးရှိပါတယ်။ လောကုတရ္တာ သရဏဂုံ ဆုသိည်မှာ သစ္စာလေးပါးကို သိမြင်ပြီးသူ ၏ သန္တာန်၌ဖြစ်သော ရတနာသုးံ ပါးအပေါ် ကုိး ကွယဆ်ည်းကပ်သော စိတြ် ဖစ်၏။ သစ္စာသိသ၏ူသရဏဂုံ ဖြစ်သည်။ လောကုတရ္တာ သရဏဂုသံည် ပျက်စီး ခြင်းမရှ၊ိ ညစ်ညူးခြင်းလည်း မရှေိတာ့ပေ။ မဂ်စတိန်ှင့်
အတူတြူ ဖစ်သော ရတနာသုးံ ပါးအပေါ် ကုိး ကွယ် ဆည်းကပ်တစဲ့ တိ် ဖြစ်ပေသည်။ ထုေိ့ ကြာင့် အရိယာ
ပုဂ္ဂုိ လ်ဖြစ်မသှာလျင် လောကုတရ္တာ သရဏဂုကုိံ ရပေမည်။ ပုထဇုဉ်အဖြစ်နငှ့် ဘယ်သောအခါမှ မရနိုင်ေပ မဖြစ်နငိုေ် ပ။ လောကုတရ္တာ သရဏဂုသံည် ရတနာသုံးပါးအပေါ် တွေဝေခြင်း ယုမှာံးခြင်း မရှေိတာ့
သောကြောင့် အထူးဆောက်တည်စရာ မလုပိါပဲ အလုလိတို ည်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သရဏဂုလုိံ့ခေါ်တာပါ။ လောကီ သရဏဂုကျံတော့ ကိုးကွယဆ်ည်းကပ်ပေုံ လးမျိုးရှပိါတယ်။ အဲဒါဘာတွေလလဲဆို့ေို တာ့
(၁)။ မိမကိယို က်ို ရတနာသုံးပါးအား အပ်နငှ်း ခြင်း (အတ္တသန္တွယျိာတန သရဏဂု)ံ ဆုလိတိုာက မိမရိဲ့
ဘဝကို ရတနာသုးံ ပါးအား စွနလ့်ှူပြီး ကုိး ကွယဆ်ည်းကပ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရာထူး စည်းစိမ် အာဏာ ဘယ်လအို ရေးနဲ ပြဲ့ ကုံကြုံ မိမအိသက်သာ အသေခံမည်၊ ရတနာသုးံ ပါးကို မစွနပ့်ဲအသက်ထက်ဆုးံ ဆည်းကပ် ကုိး ကွယမ်ှု ကို ခေါ်တာပါ။
(၂)။ မိမကိယို က်ို ရတနာသုံးပါသည်သာလျှင် ကုိး ကွယလ်ေဲလျာင်းရာ ရှတိယ် (သုမိ့ ဟုတ)် ရတနာသုးံ ပါး အပေါ်လုံးဝအားကုိး အားထားပြုခြင်း (တပ္ပရာယဏတာ သရဏဂု)ံ ။ ဆုလိတိုာက ရတနာသုံးပါမှတစ်ပါး အခြားကိုးကွယရ်ာ လဲလျောင်းရာ ဆည်းကပ်ရာ (နတ် ဗြဟ္မာ ဖန်ဆင်းရှင် ဘိုးတော်စသည်) ဖြင့်
ဆည်းကပ် ကိုး ကွယရ်ာ မရှဘိူး၊ ရတနာသုးံ ပါသည်သာလျှင် ကိုးကွယရ်ာအစစ် ဖြစ်တယ်လို့ သဒ္ဓါ ပညာ ဦးစီးတဲ့ ကုိး ကွယမ်ှု ကို ခေါ်တာပါ။
(၃)။ မိမကိယို က်ို ရတနာသုံးပါးရဲ့ တပည်သ့ားအဖြစ်ကို ခံယြူ ခင်း (သိဿဘာဝူပဂမဏ သရဏဂု)ံ ၊ ဆုလိတိုာက ရတနာသုံးပါးသည်သာလျှင် သံသရာဝဋ် ဆင်းရဲမှ ထွက်ေမြာက်ရာအတွက် စစ်မန်ှသော နည်းမှန် လမ်းမှန် ဆရာဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့် ရတနာသုံးပါးရဲ့ တပည့်အဖြစ် မိမကိယို က်ို ခံယြူ ပီး ကုိး ကွယြ် ခင်းကို ဆုလိတိုာပါ။ (၄)။ ရတနာသုးံ ပါးအား ဝပ်တွားခယ မိမကိယို က်ို နှပိခ်ျပြီး အလွနရ်ိုသေသော အခြင်းအရာကို ပြသခြင်း။ (ပဏိပါတ သရဏဂု)ံ ဆြုိ ပီး လေးမျိုးရှပိါတယ်။ (၁) အမှတစ်ဉ်လေးဖြစ်တဲ့ ပဏိပါတသရဂုမှာံကျတော့ မြတ်စွာဘုရားရှငဟ်ာ ဘာသာခြားများ ကဲ့ရဲ့ရှုခံျ့သလို ကုလားမျိုး မဟုတပ်ါဘူး၊ သာကီဝင် မင်းမျိုးပါ။ မြတ်စွာဘုရားရှငက်သာကီဝင် မင်းမျိုးဖြစ်လို့
သာကီဝင် မင်းမျိုးတွေက ဘုရားလို့ မှတယ်ြူ ခင်းမရှပိဲ ဆွေမျိုးအဖြစ် မှတယ်ြူ ပီး ရှခိးု ခြင်း ခရီးဦးကြိုဆြုိ ခင်း
လက်အပုခ်ျီခြင်း အရုေိသပေးခြင်းမျိုးက တကယ်ကြည်ညို လေးစားလုမိ့ ဟုတပ်ဲ ဆွေးမျိုးဆုတိဲ့ အသိနဲ့ ကုိး ကွယတ်ာ ဖြစ်သည့်အတွက် သရဏဂုံ ဆောက်တည်ရာ မရောက်ပါဘူး။
(၂) ရတနာသုံးပါး မကိုးကွယရ်င် ဘေးဒုက္ခေ ရာက်မယ် စီးပွားပျက်မယ် ရာထူးကျမယ် အလုပက်ငိုေ် တွ အဆင်မပြေဖြစ်မယ် ကျန်းမာရေးညံ့မယ် စသည်ဖြင်ပေ့ါ့လေ) အကြောက်တရားကို အခြေခံပြီး ရှခိးု ခြင်း
ခရီးဦးကြိုဆိုခြင်း လက်အပုခ်ျီခြင်း အရုေိသပေးခြင်း စသည်ပြုခြင်းသည် တကယ်စစ်မနှေ်သာ သဒ္ဓါတရား မဟုတ်ေသာကြောင့် သရဏဂုတံည်ရာမရောက်ပါဘူး။
(၃) မြတ်စွာဘုရားရှငအ်ား လောကီလမ်းညွှနမ်ှု အဆုးံ အမကို နာယူရသောကြောင့် ဆရာအဖြစ်မတှယ်ြူ ပီး ရှခိးု ခြင်း အရုေိသပြုခြင်း လက်အပုခ်ျီခြင်း ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းသည် သရဏဂုေံဆာက်တည်ရာ မဖြစ်ပေ။
ဆုလိတိုာက မြတ်စွာ ဘုရားကို ကိုးကွယြ် ခင်း မြတ်စွာ ဘုရား တရားကိုနာယူလျှင် (စီးပွားတုိး တက်ခြင်း ကျန်းမာခြင်း ရာထူးတုိး တက်ခြင်း) စတဲ့ လောကီကောင်းကျိုးတွေကို ရရှခိံစားရတယ်ဆတိုဲ့ ကုိး ကွယ်
ဆည်းကပ်ခြင်း၊ ရှိခိးု ခြင်း၊ လက်အပ်ုချီခြင်း၊ စတဲ့အမှုများသည် သရဏဂုေံဆာက်တည်ရာ မရောက်ပါ။
(၄) ရတနာသုံးပါး၏ သီလဂုဏ၊် သမာဓိဂဏု၊် ပညာဂုဏ် တုကို့ ရည်မနှ်းပြီး ရှခိးု ခြင်း လက်အုပခ်ျီခြင်း အရုေိသပေးခြင်း ခရီးဦးကြိုဆိုခြင်း အမှမျုားကို ပြုလုပလ်ျှင် သရဏဂုံ ဆောက်တည်သည် မည်ပါသည်။ သရဏဂုတံည်ခြင်း အကျိုးတရားက သရဏ ဆုသိည်မှာ................
ဘေးအန္တရာယ်ကို တားဆီး ကာကွယ်ပေးတတ်သော၊ ပယ်ဖျောက်ပေးတတ်သော အရာ/ပုဂ္ဂုိ လ် ဟု အဓိပ္ပါ ယ် ရသည်နငှ့် လျော်ညစွီာ .......
၀ဋ်ဘေး (ကိလေသာဝဋ်၊ ကမ္မ၀ဋ်၊ ၀ိပါက၀ဋ်) စိတပ်ေူလာင်မှေုဘး ကုယိဆ်င်းရဲမှုဘေး
ဒုဂတ္ဂဘိဆုံ င်းရဲမ၊ှု (အပါယ်လေးပါး)တို့မှ လွတ်ေမြာက်ခြင်း တုကို့ ဆုလိသို ည်။ သရဏဂုံ ပျက်စီး ပုကာံး ဆွေမျိုးဥာတိ အမှတြ် ဖင့် လည်းကောင်း၊ ကြောက်ရြွံ့ ခင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ အတတ်ပညာ သင်ပေးသူ ဆရာအဖြစ် မှတယ်ြူ ခင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ မည်သက့ူို မဆို ရှိခိးု ခြင်း လက်အပုခ်ျီခြင်း အရုေိသပေးခြင်း ခရီးဦးကြိုဆြို ခင်း စသည်ကို ပြုလုပလ်ျှင် သရဏဂုံ မပျက်ဆီး ပါ။
သုရိ့ာတွင် ရတနာသုံးပါမှ တစ်ပါးသော ပုဂ္ဂို လ်တ၌ို့ သီလ သမာဓိ ပညာ ဂုဏြ် ကီးမြတ်မှု တုကို့ ရည်မတှ် လျက် အထက်ကဖော်ပြသည့် လောကီသရဏဂုံ ဆောက်တည်ခြင်း လေးမျိုးကို ပြုလုပလ်ျှင၄်င်း၊သရဏဂုံ ဆောက်တည်ထားသူ သေဆုးံ သွားလျှင်သော်လည်းကောင်း သရဏဂုလံုးံ ဝ ပျက်စီး ပါတယ်။
ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို ပယ်နှုတ်ပြီး နတ်ကြို ဖစ်စေ၊ တခြားသော မယ်တော် ဘိုးတော်များကို လည်းကောင်း ကုိး ကွယဟ်ု သတ်မတြှ် ပီး ကိုးကွယဆ်ည်းကပ်ပါက သရဏဂုပျံက်စီးပါတယ်။
ရတနာသုံးပါ တု၏ိ့ ဂုဏ်ေတာ်များ၌ မသိနားမလည်ခြင်း၊ ရတနာသုံးပါးအပေါ် တွေဝေခြင်း၊မှားယွင်း စွာ
ယူဆခြင်း၊ မရုမိသေ မလေးမစား ပြုလုပမ်ှု များသည် ဆောက်တည်ထားသော သရဏဂုံ ညှုိး နွမ်း ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် သရဏဂုံ မညှိုးနွမ်းအောင် မပျက်စီး အောင် စောင်ထ့နိ်း ကြဖို့ အထူးတုကိတ်ွန်း လုတိာပါ။ ဒါက
ကုိး ကွယမ်ှု နှင့် ဆုငိတ်ဲ့ သရဏဂုံ ပျက်စီး ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒဘ္ဓာသာမှ ကိုးကွယမ်ှုမှားပြီး ပျက်စီး သွားတဲ့ သရဏဂုံပျက်စီး မှုပါ။
(ခ) အယူဝါဒပျက်စီး ခြင်း
နောက်တစ်ခကုအယူဝါဒကြောင့် ဗုဒဘ္ဓာသာမှပျက်စီး ပုကုိံပြောပြပါ့မယ်။ အယူဝါဒ ပျက်စီးပုကံဒီလပိုါ။ ဗုဒဘ္ဓာသာဝင်သည် …................ (၁)။ဘုရား (၂)တရား
(၃)သံဃာ (၄)ကံ ကံ၏အကျိုး
(၅)အကြောင်းနှငအ့် ကျိုး ဆက်သယြွ် ဖစ်မှု(ပဋိစသ္စ မုပ္ပါဒ်) (၆)အတိတဘ်ဝ၊ အနာဂတ်ဘဝတုကို့ ယြုံ ကည်ရပါတယ်။ ထု၌ိကံသည် ကုသလို က်ံ (ကောင်းသောအလုပ)် ၊ အကုသလို က်ံ (မကောင်းသောအလုပ)် ပင် ဖြစ်ပါတယ်။ လောက၌ မည်သည်ပ့ဂ္ဂု လိမ်ဆို ကောင်းတာ(ကုသလို )် လုပလ်ျှင် ကောင်းကျိုး ခံစားရပါတယ်။
မကောင်းတာ (အကုသလို )် လုပလ်ျှင် မကောင်းကျိုးကို ခံစားရပါတယ်။ မိမြိ ပုလုပလ်ကိုေ် သာ ကံသည်
မိမ၏ိကုယ်ိပငို ဉ်စ္စာ (ကမ္မဿကာ) မည်ပါတယ်။ မိမြိ ပုလုပလ်ကိုေ် သာ ကံအရ ကုသလို က်ံ လုပလ်ကို လ်ျှင် လည်း ကောင်းကျိုးကို ခံစားရခြင်း၊ မကောင်းတဲ့ အကုသလို က်ကုိံ ပြုလုပလ်ကို လ်ျှငလ်ည်း မကောင်းသော အကျိုးကို ခံစားရခြင်း စတဲ့ ကောင်းမွေ ဆိုးမွေ (ကမ္မဒါယာဒ)ကို ခံယရူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထုသို့ အမှနက်ို
လက်ခယြုံ ကည်နေခြင်းသည် (ကမ္မဿကတာသမ္မာဒိဋ္ဌ)ိ လို့ ခေါ်တာပါ။ ဗုဒဘ္ဓာသာဝင် တစ်ဦး သည် ထုသို့ လက်ခယြုံ ကည်နေပါက အမှနက်ို လက်ခေံနခြင်း ဖြစ်လို့ အယူဝါဒ မှနက်န်သောကြောင့် အယူဝါဒ
မပျက်စီး ပဲ တည်နေမည်ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်က ဖော်ပြထားခဲတဲ့ အချက်ခြောက်ချက်ကို မယြုံ ကည်
လက်မခံပဲ အောက်ဖော်ပြလတ္တေံ့ သာ အချက်များကုလိက်ခယြုံ ကည်ပါက သရဏဂုပျံက်စီး မည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒအီချက်တွေက...............
(၁) လောကမှာ ဖန်ဆင်းရှငရ်ှိ၏။ မြေကြီး၊ ဟိမဝန္တာတောင်၊ သမုဒရ္ဒာ၊ စကြာဝဠာနှင့် လူစတဲ့ သတ္တဝါ များစွာကို ထုဖိန်ဆင်းရှငက်ဖန်ဆင်းသည်ဟု မှားယွင်းစွာ ယူဆတတ်ကြပါတယ်။ မှားယွင်းစွာ ခံယတူတ် ကြပါတယ်။ အဲဒီ အယူမှားဝါဒကို ဖန်ဆင်းရှင် (ဣဿရနိမ္မာ န)ဝါဒလို့ ခေါ်ပါတယ်။
(၂) တစ်ချို့သော ပုဂ္ဂု လ်ိများဟာ လောကမှာ ကုသလို က်၊ံ အကုသလို က်ံ ဆုတိာမရှ။ိ ကောင်းမှုကို ပြုလုပ် သော်လည်း ကုသလိုမဖြစ် ကုသလို မ်မည်။ အကုသလို(သူတစ်ပါးအသတ်သတ်ခြင်း၊ သူတစ်ပါးဥစ္စာ ခုိး ယူ ခြင်းစသည်) ပြုလုပ်ေသာ်လည်း အကုသလိုမဖြစ်၊ အကုသလို မ်မည် စတဲ့ အယူဝါဒများကို လက်ခကျံင်သ့ုးံ နေမှုများ ရှေိနပါတယ်။ အဲဒဝီါဒကို အကြောင်းတရားကို ပယ်တဝဲ့ါဒဖြစ်လို့ (အကိရယိဒိဋ္ဌ)ိ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ (၃) တစ်ဖန် ကုသလို က်၊ံ အကုသလို က်တံ၏ို့ အကျိုးတရား ဆုတိာမရှ။ိ ကုသလို က်ံ ပြုလုပ်ေသာ်လည်း
ကောင်းကျိုးမရ။ အကုသလို က်ံ (သူတစ်ပါးဥစ္စာ ခုိး ယူခြင်း၊ သူတစ်ပါး အသတ်ကို သတ်ဖြတ်ခြင်း ) စတဲ့ မကောင်းတဲ့ အကုသလို က်ံ များကို လုပြ် ခင်းသည် မကောင်းကျိုး မခံစားရ၊ ကုသလို အ်ကျိုးပင် ရသေးသည် ဟု ထင်မတှ် ယူဆနေကြပါတယ်။ ထုအိယူဝါဒသည် အကျိုးတရားကို ပယ်သတ်ခြင်းကြောင့် (နတ္ထကိဝါဒ) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဘယ်လို ဘာသာများရဲ့ အယူဝါဒ ဆုတိာ သိသာလောက်မှာ ပါ။
(၄) ထြုိ့ ပင် ကုသလို၊ အကုသလို မ်ရှ။ိ ကုသလို က်ရဲံ့ ကောင်းကျိုး၊ အကုသလို က်ရဲံ့ မကောင်းကျိုး ဆုတိာ လည်း မရှ။ိ ဆုလိတိုာက အလှူဒါန ပြုခြင်းသည် အကျိုးမဲတ့အဲ့ လုပ် ပုကိဆ်ကုံနတ်ဲ့ ပုကိဆ်ြံ ဖုန်းခြင်း ဖြစ်တယ်။ သူတစ်ပါးအသတ်ကို လည်လှးီ ပြီး သတ်ဖြတ်ခြင်းသည် ကုယိမ်ခံရပဲ။ ဖြတ်တဲ့ဓါးကသာ
ခံရတယ် ဆုတိဲ့ အယူဝါဒများကုလိည်း ခံယကျူင်သ့ုးံ နေကြပါတယ်။ ထုအိယူဝါဒများသည် အကြောင်းရော၊ အကျိုးရော နှစပ်ါးလုံးကို ပယ်သတ်ခြင်း ဖြစ်တအဲ့ တွက် (အဟေတုကဒိဋ္ဌ)ိ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ထုေိဖ်ာပြခြဲ့ ပီးတဲ့ မှားယွင်း တဲ့ (မိစ္ဆာဒိဋ္ဌ)ိ အယူတစ်မျိုးမျိုးကို လက်ခယြုံ ကည်လကို လ်ျှင် ထုသိ၏ူမူလက
ရှေိနသော မှနက်န်သော မြင့်မြတ်သော ကောင်းသော (သမ္မာဒိဋ္ဌ)ိ ပျက်စီး ပါတယ်။ သရဏဂုလံည်း ပျက်စီး ပါတယ်။ ဒါက အယူမှားတဲ့ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌေိကြာင့် သရဏဂုံ ပျက်စီး ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထုပျိက်စီး မှုသည် အပြစ် မကင်းတဲ့ ပျက်စီး မှုပါ။ သရဏဂုံ ဆောက်တည်တသ့ဲူသေသွားလို့ ပျက်တဲ့ သရဏဂုကံအပြစ်ကင်းတဲ့
သရဏဂုံပါ။ ရတနာသုးံ ပါးကို အာရုံပြုပြီး သေသွားမယ်ဆရို င်တောင် အပါယ်လေးပါးက လွတပ်ါတယ်။
သေသွားလို့ သရဏဂုံ ပျက်တယ်ဆိေုပမယ့် သေခါနီး နှလုးံ သွင်း မှနသ်ွားတဲအ့တွက် မသေခင်မှာ ရတနာ သုးံ ပါးမှ တစ်ပါး မည်သည့် ပုဂ္ဂု လိက်မှိုမဆည်းကပ် မကုိး ကွယြ် ခင်း၊ အယူဝါဒကြောင့် သရဏဂုံ
မပျက်စီး ခြင်း စတဲအ့ချက်တွေနဲ့ ပြည့်စေုံ နတော့ သရဏဂုံ တည်ခြင်းဆုတိဲ့ အကြောင်းတရားကြောင့် အပါယ်လေးပါးက လွတ်ေမြာက်ခြင်း ဆုတိဲ့ အကျိုးတရားကို ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆုရိင် သေခါနီး ဘာမှ
နှလုးံ သွင်း လို့ မရတော့ဘူး ဆုရိင် ဘုရား တရား သံဃာကုသိာ အာရြုံ ပုပါလို့ တုကိတ်ွန်း လုတိာပါ။ အဲလသိုာအာရုံပြုမည်ဆိရုင် သရဏဂုတံည်ပြီး သေတဲ့ ပုဂ္ဂု လြိ် ဖစ်လို့ အပါယ်လေးပါး လွတ်ေမြာက်မယ်ဆတိုာမြတ်စွာဘုရား ကုယိစ်ား အာမခံပြီး နှိးု ဆော်တကို တ်နွ်း လုက်ိရပါတယ်။ အရှငဝ်ိမလဝံသ(နာလန္ဒာ တက္ကသလိုအိနယ္ဒိ နုငိင်)ံ ။
(က) သရဏဂုံပျက်စီးခြင်း ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်မှ ပျက်စီးပုံ (က)သရဏဂုံပျက်စီးခြင်း၊(ခ) အယူဝါဒပျက်စီးခြင်းဆိုပြီး ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ (ပဏိပါတ သရဏဂုံ) ဆိုပြ...